Ruto: Go’aankii BBI waa guul u soo hoyatay shacabka iyo dastuurka | Star FM
Home Wararka Kenya Ruto: Go’aankii BBI waa guul u soo hoyatay shacabka iyo dastuurka
Ruto: Go’aankii BBI waa guul u soo hoyatay shacabka iyo dastuurka
Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa sheegay in go’aankii maxkamadda racfaanka meesha uga saartay geddisocodkii la doonayay in wax looga beddelo xeerarka wadanka uu mar kale xaqiijinayo inaynan jirin cid ka sarreysa sharciga iyo madax bannaanida garsooorka.
Ruto oo hoygiisa xaafadda Karen ee magaalada Nairobi kula hadlay warbaahinta gelinkii dambe ee shalay ayaa xusay in aysan jirin cid guuleysatay ama laga adkaaday.
Waxaa uu carrabka ku dhuftay in guul ay u soo hoyatay dadweynaha kenyaanka, dastuurka iyo sarraynta sharciga.
Waxaa uu bogaadiyayay garsoorayaasha sida geesinimada leh u difaacay dastuurka, waa sida uu hadalka u dhigay ku xigeenka madaxweynaha dalka William Ruto.
Dr .Ruto ayaa ku baaqay in wakhtigii lagu bixiyay geddisodkii BBI loo weeciyo dhismaha qaranka.
Waxaa uu intaa ku daray in la joogo xilligii la dejin lahaa xiisadda siyaasadeed ee dalka ka jirta, islamarkaana gacmaha la is-qabsado oo mudnaanta loo siiyo shacabka kenyaanka.
Waxaa uu sidoo kale ku baaqay in dib loo habeeyo siyaasadaha si wax looga qabto arrimaha ugu daran ee dalka ka jira oo ay ka mid yihiin shaqo la’aanta dhallinyarada iyo heerarka saboolnimada oo aad u sarreeya.
Ku xigeenka madaxweynaha dalka ayaa ugu dambeyntii sheegay in la joogo wakhtigii dalka uu si wada jir ah uga fakari lahaa sida mudnaanta koowaad loo siin karo ka shaqeynta danaha tirada ugu badan ee muwaadiniinta.
Previous articleTaaliban oo sheegtay inaysan jirin ajaanib la afduubtay
Next articleDowladda oo racfaan ka qaadanaysa go’aankii maxkamadda ee BBI